ဆုရတဲ့ပိုကျဆံနဲ့ မမေကေို့တိုကျဆောကျပေးမယျဆိုတဲ့ အသကျ ၅ နှဈအရှယျ သိုငျးပွောငျးပွနျသမားလေး ဘုနျးမွတျမငျးနဲ့ အငျတာဗြူး - 9style
Home/နာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်များ/ဆုရတဲ့ပိုကျဆံနဲ့ မမေကေို့တိုကျဆောကျပေးမယျဆိုတဲ့ အသကျ ၅ နှဈအရှယျ သိုငျးပွောငျးပွနျသမားလေး ဘုနျးမွတျမငျးနဲ့ အငျတာဗြူး
ပရိသတ်ကြီးခင်ဗျာ… ခုဆိုရင် Myanmar’s Got Talent 2019 ရဲ့ နောက်ဆုံး ဖိုင်နယ် ပြိုင်ပွဲကြီးကို ကျင်းပပြီးစီးသွားပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်…. ယခုအကြိမ်နဲ့ ဆိုရင် Myanmar’s Got Talent ကိုကျင်းပလာတာ ၆ ကြိမ်တိတိရှိသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်….ဒီ ၆ ကြိမ်မှာတော့ Myanmar’s Got Talent ပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက် အသက်အငယ်ဆုံး ချန်ပီယံ တစ်ဦးပေါ်ထွက်လာပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်…သူကတော့ အသက် ၅ နှစ်သာ ရှိသေးတဲ့ သိုင်းပြောင်းပြန်သမားလေး ဘုန်းမြတ်မင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်…. အသက်ငယ်ပေမဲ့ ပြသသွားတဲ့ သိုင်းစွမ်းရည်တွေကတော့ အရွယ်နဲ့ မလိုက်အောင် ထူးချွန်လှတာပါ….
နောက်ဆုံးဖိုင်နယ်အဆင့်မှာ ဘုန်းမြတ်မင်းလေးဟာ ပြိုင်ဘက်တွေ ဖြစ်ကြတဲ့ Baby Star ၊ Feng Yi ၊ ရွှေစိုးရာဇာ၊ Angelo Erasmus ၊ မင်းမြတ် ၊ Damien ၊ ဝင်းစန်းအောင်၊ သားတို့အမြွှာ မိုး ဖြိုး၊ ဇော်နိုင်ဝင်း စတဲ့ အဖွဲ့တွေနဲ့ အတူ အကြိတ်အနယ် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရပါတယ်…ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ သင်ကြားပေးမှုနဲ့ အတူ သိုင်းပညာတွေကို အရွယ်နဲ့ မမျှအောင်တတ်ကျွမ်းခဲ့တဲ့ မန္တလေးသား ဘုန်းမြတ်မင်းလေးဟာ ဖိုင်နယ်အဆင့်ကို လက်သိုင်း၊ တုတ်သိုင်း၊ ဓားသိုင်း စတဲ့ ခက်ခဲတဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာ သိုင်းပညာရပ်တွေနဲ့ အဆင့်ဆင့် ဖြတ်ကျော်ပြီး ရောက်ရှိလာခြင်း ဖြစ်ပါတယ်…
ဖိုင်နယ်မှာလည်း နာမည်ကြီး မျက်လှည့်ပညာရှင် Damien နဲ့ Winner ဆုအတွက် ၂ ဦးတည်း နာမည်ကြေညာခံရချိန်မှာ တော့ Winner အဖြစ် ဘုန်းမြတ်မင်းနာမည်ကို ကြေညာပေးခဲ့ပြီး Myanmar’s Got Talent ရဲ့ အသက်အငယ်ဆုံး Winner တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်….ခုလို အရွယ်နဲ့ မလိုက်အောင် သိုင်းစွမ်းရည်ထက်မြက်တဲ့ ဘုန်းမြတ်မင်းလေးဟာ မိဘကျေးဇူးကို ငယ်ငယ်နဲ့ ဆပ်နိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်…အဲတာကတော့ Myanmar’s Got Talent 2019 မှာ ရရှိခဲ့တဲ့ ဆုကြေးငွေ သိန်း ၁၅၀ ကို ဖေဖေနဲ့ မေမေအတွက် ၃ ထပ်အိမ်ဆောက်ပေးသွားမယ်လို့ ဘုန်းမြတ်မင်းလေးက အင်တာဗျူးမှာ ဖြေဆိုခဲ့တာပါ….
ဖိုင်နယ်မတိုင်ခင်မှာ သားလေးဟာ အဖျားရောဂါ ခံစားခဲ့ရပြီး အဲဒီကြားထဲက ကြိုးစားလေ့ကျင့်ခဲ့တာပါတဲ့…ပြီးတော့ သားလေးက သူ့ကို အားပေးကြတဲ့သူတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့လည်း အင်တာဗျူးလေးထဲမှာ ပြောသွားပါသေးတယ်… ကဲ…သားလေးရဲ့ အင်တာဗျူးလေးကို ပရိသတ်တွေ ကြည့်လို့ရအောင် အောက်မှာ ပြန်မျှဝေပေးလိုက်တယ်နော်…ရုပ်သံဖိုင်အားကြည့်ရန်နှိပ်ပါ
Credit– HW (Shwe Yaung Lan)Video Source : Cele Gabar
ပရိသတျကွီးခငျဗြာ… ခုဆိုရငျ Myanmar’s Got Talent 2019 ရဲ့ နောကျဆုံး ဖိုငျနယျ ပွိုငျပှဲကွီးကို ကငျြးပပွီးစီးသှားပွီပဲ ဖွဈပါတယျ…. ယခုအကွိမျနဲ့ ဆိုရငျ Myanmar’s Got Talent ကိုကငျြးပလာတာ ၆ ကွိမျတိတိရှိသှားပွီ ဖွဈပါတယျ….ဒီ ၆ ကွိမျမှာတော့ Myanmar’s Got Talent ပွိုငျပှဲတဈလြှောကျ အသကျအငယျဆုံး ခနျြပီယံ တဈဦးပျေါထှကျလာပွီပဲ ဖွဈပါတယျ…သူကတော့ အသကျ ၅ နှဈသာ ရှိသေးတဲ့ သိုငျးပွောငျးပွနျသမားလေး ဘုနျးမွတျမငျးပဲ ဖွဈပါတယျ…. အသကျငယျပမေဲ့ ပွသသှားတဲ့ သိုငျးစှမျးရညျတှကေတော့ အရှယျနဲ့ မလိုကျအောငျ ထူးခြှနျလှတာပါ….
နောကျဆုံးဖိုငျနယျအဆငျ့မှာ ဘုနျးမွတျမငျးလေးဟာ ပွိုငျဘကျတှေ ဖွဈကွတဲ့ Baby Star ၊ Feng Yi ၊ ရှစေိုးရာဇာ၊ Angelo Erasmus ၊ မငျးမွတျ ၊ Damien ၊ ဝငျးစနျးအောငျ၊ သားတို့အမွှာ မိုး ဖွိုး၊ ဇျောနိုငျဝငျး စတဲ့ အဖှဲ့တှနေဲ့ အတူ အကွိတျအနယျ ယှဉျပွိုငျခဲ့ရပါတယျ…ဖခငျဖွဈသူရဲ့ သငျကွားပေးမှုနဲ့ အတူ သိုငျးပညာတှကေို အရှယျနဲ့ မမြှအောငျတတျကြှမျးခဲ့တဲ့ မန်တလေးသား ဘုနျးမွတျမငျးလေးဟာ ဖိုငျနယျအဆငျ့ကို လကျသိုငျး၊ တုတျသိုငျး၊ ဓားသိုငျး စတဲ့ ခကျခဲတဲ့ မွနျမာ့ရိုးရာ သိုငျးပညာရပျတှနေဲ့ အဆငျ့ဆငျ့ ဖွတျကြျောပွီး ရောကျရှိလာခွငျး ဖွဈပါတယျ…
ဖိုငျနယျမှာလညျး နာမညျကွီး မကျြလှညျ့ပညာရှငျ Damien နဲ့ Winner ဆုအတှကျ ၂ ဦးတညျး နာမညျကွညောခံရခြိနျမှာ တော့ Winner အဖွဈ ဘုနျးမွတျမငျးနာမညျကို ကွညောပေးခဲ့ပွီး Myanmar’s Got Talent ရဲ့ အသကျအငယျဆုံး Winner တဈဦးဖွဈလာခဲ့ပါတယျ….ခုလို အရှယျနဲ့ မလိုကျအောငျ သိုငျးစှမျးရညျထကျမွကျတဲ့ ဘုနျးမွတျမငျးလေးဟာ မိဘကြေးဇူးကို ငယျငယျနဲ့ ဆပျနိုငျတော့မှာ ဖွဈပါတယျ…အဲတာကတော့ Myanmar’s Got Talent 2019 မှာ ရရှိခဲ့တဲ့ ဆုကွေးငှေ သိနျး ၁၅၀ ကို ဖဖေနေဲ့ မမေအေတှကျ ၃ ထပျအိမျဆောကျပေးသှားမယျလို့ ဘုနျးမွတျမငျးလေးက အငျတာဗြူးမှာ ဖွဆေိုခဲ့တာပါ….
ဖိုငျနယျမတိုငျခငျမှာ သားလေးဟာ အဖြားရောဂါ ခံစားခဲ့ရပွီး အဲဒီကွားထဲက ကွိုးစားလကေ့ငျြ့ခဲ့တာပါတဲ့…ပွီးတော့ သားလေးက သူ့ကို အားပေးကွတဲ့သူတှကေို ကြေးဇူးတငျပါတယျလို့လညျး အငျတာဗြူးလေးထဲမှာ ပွောသှားပါသေးတယျ… ကဲ…သားလေးရဲ့ အငျတာဗြူးလေးကို ပရိသတျတှေ ကွညျ့လို့ရအောငျ အောကျမှာ ပွနျမြှဝပေေးလိုကျတယျနျော…ရုပျသံဖိုငျအားကွညျ့ရနျနှိပျပါCredit – HW (Shwe Yaung Lan);Video Source : Cele Gabar
ပါးစပ်အဟောင်းသား ဖြစ်သွားစေမယ့် အမိုက်စားပုံရိပ်တွေကို ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ နန်းဆုရတီစိုး
စိုင်းဆိုင်မောဝ် ကွယ်လွန်သည့်သတင်း မမှန်ကန်ကြောင်း သူကိုယ်တိုင် ရှင်းလင်း
ပရိသတ်တွေကို ရင်ခုန်သံမြန်သွားအောင် လုပ်လိုက်ပြန်တဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်း
ကိုးရီးယားနိုငျငံက Nami ကြှနျးလေးကို အလညျအပတျခရီးရောကျရှိနတေဲ့ မငျးသမီးခြောလေး နနျးစုဦး